Prezidaantii yunaaytiid Istees Baraak Obaamaa fi isaan dura prezidaantii kan turan Joorj W. Buush kaleessa magaalaa Daalaas keessatti sirna yaadannoo polisoota shanan ajjefamaniif qophaa’e irratti argamuun kabajaa qaban ibsanii jiru.
Miseensoonni humnootii nageenya hawaasa adda addaa keessatti nagaa eegsisuuf hojii jabaa gaggeessaniif prezidaant Obaamaan galateeffatanii jiru. Garuu logii sanyii jiru irratti dubbatamuu qaba jedhan.
Prezidaantii yunaaytiid Isteets Baraak Obaamaan Daalaasitti oggaa hasaha godhan
Prezidaant Obaamaan kaleessa Daalaas keessatti uummata gaddeetti dubbachuuf muxannoo ga’a qabu. Sababiin isaas. Orlaandoo Floridaa keessatti ji’a darbe , Charleston South karolaayinaa keessatti waggaa darbe, sana duras hanga tokko namoota namni jalaa ajjefamanii gadda keessa turan hasoofsisaa turan.
Polisoota shanan Daalaasitti ajjefaman
Hawaasni polisoota irra itti gaafatama guddaa ka’ee tarkaanfii ofii isaa fudhateef garuu itti gaafatama xiqqoo fudhata jedhan Obaamaan.
Prezidaantiin yunaaytiid Istees duraanii Joorj Buush biyya haqaa fi gara laafina qabdu kan abjuu keenya isa gaarii keessati arginu ijaaruu feena. Kunis dhiraa fi dubartoonni yunifoormii uffataniif eegumsi yeroo godhamu milkaa’uu danda’aa jedhan.
Magaalaa Daalaas lafa sirni yaadannoo polisoota ajjeefamaniif gaggeeffame kanatti namoonni hangi tokko daw’annaa Obaamaa kana faarsan.
Hedduun akka jedhantti garuu loogii sanyii deebi’ee ka’aa jiruun kan miidhame lammiwwan Amerikaa hidda dhalata Afrikaa qabanii dha jedhu
Namnii prezidaantii ta’uun filamuuf jiru haala kana faana bu’e erga uumamee booda tarkaanfii fudhachuu oto hin taane ituu hin uumamiin dura haala ittiin ittisan lafa kaa’uu dha.
Seeraa fi imaammatoota kan hawaasni guutummaa Amerikaa itti mufatee jiru jijjiruu dha jedhu.
Prezidaant Obamaan sirna Yaadannoo Poolisoota ajjeefaman kan Daalaas Irratti argaman
Hookkarri Sukaneessaan raawwatamu iyyuu Ameerikaan addaan hin qoodamne jedhan Prezidaant Obaamaan​